Doorashada Soomaaliya 2020-2021 Waa Tijaabada Dimoqraadiyada - Awdinle Online
Home Maqaalo Doorashada Soomaaliya 2020-2021 Waa Tijaabada Dimoqraadiyada
Doorashada Soomaaliya 2020-2021 Waa Tijaabada Dimoqraadiyada
Haddii doorasho hal qof iyo hal cod ah ay suurtaggeli weydo muxuu noqon doonaa beddelkeeda?
Tii xigtay ee 2016, waxuu qorshuhu ahaa in la qabto sidoo kale doorasho hal qof iyo hal cod ah, haddana nasiibdarro sababaha maanta jira oo kale aawadood ayey u suurtaggeli weyday.
Sidaas darteed, markale danaystayaasha siyaasadda waxay ku heshiiyeen shirkii Baydhabo ee 25kii Juun 2016 in 135tii oday dhaqameed lagu beddelo in xildhibaan kasta ay soo xushaan 50 ergo oo ka yimaadda reerka ama jufada xildhibaanka dooraneysa.
Maanta waxaa muuqata in doorasho la qabto 2020/21 aanay sinnaba suurtaggal u ahayn, si loo helo nidaamka metelaad daah-furan, haddana fursad u siinaya muwaaddin kasta oo gaaray da’da doorashada meel kastaba ha ka jooggee dalka inuu codkiisa si xur ah u baxsado.
Habkaas oo ku salaysan halbeegga caalamiga ah ee “hal qof iyo hal cod”.
Marka afraad, ma jirto meel ay Dastuurka Dalka kaga xusan tahay in doorashadu muddo dhaafi karto waqtigeeda, muddo xileedka xaddidan ee dastuuriga ahna la kordhin karo, haddii aan dib loogu noqoneyn dhaqanxmumadii 2012 iyo 2016.
Dastuur ninka hoggaanka haya uu sida uu doono u bedbeddelaa waa midka Afrika badankeedu ku hoogtay.
(t) In la kordhiyo tirada ergada xildhibaanka dooranaysa, oo ugu yaraan la’ laban-laabo (50 Ergo lagu daro tii hore ee sanadkii 2016 oo ahayd 51).
Ergada cusub ee xildhibaan walba soo xulaysanna ay sidaa ku noqoto 101 Ergo (51+50 = 101) oo kursi walba, dalka oo dhan ah (Single Uniformed Delegates).
Taas oo ka dhigi doonta tirada guud ee dadka codaynaya (101 X 275 = 27,775 qof).
(j) In la’ deegaameeyo kuraasta intii suurtaggal ah. Tusaale ahaan Koonfur Galbeed oo kale in kuraasta degaamada ka soo jeeda gobolka Bakool la deegaameeyo oo lagu qaban Xudur, kuwa Gobolka Bay iyo Shabeellada Hoose loo sii daadejin hoos. Kuwa Hirshabeelena sidaas oo kale la deegaameeyo oo xildhibaannada ka soo jeeda Hiiraan doorashadooda lagu qabto Beledweyn, halka kuwa Shabeellada Dhexe lagu haynayo Jowhar.
Sidoo kale kuraasta ka imanaysa Puntland lagu qabto Boosaaso, Dhahar, Galkacyo, Garoowe, Qardho, iwm. Guddida Doorashada ee heer qaran iyo midka Maamul-goboleed-kuna ka wada shaqeeyaan deegaamaynta kuraasta.
Previous articleMadaxweynaha Koonfur Galbeed Oo Xariga Ka Jaray Xarunta Madaxtooyada Degmada Xudur :-(Sawiro)
Next articleAl-Shabaab oo madaafiic ku garaacay Saldhiga Ciidamada Jabuuti ee Beledweyne